भैँसीगोठलाई मर्मत गरेर घर बनाउने जोग्यानीको सपना अधुरै ! – सुदूरखबर डटकम
भैँसीगोठलाई मर्मत गरेर घर बनाउने जोग्यानीको सपना अधुरै !
बझाङ, पुस २५ । टिनको पाताले छाएको भैँसी बाँध्न बनाइएको एउटा सानो झुपडी छ । झुपडीको ढोका राम्रोसँग लाग्दैन । झुपडमा ७ वर्षीय बालकदेखि ६५ वर्षीया वृद्धासम्मका ४ जनाको एउटा परिवार बस्छ । खाना पकाउने २÷३ वटा ससाना भाँडाकुँडा छन्, तिनमा कहिले खाना पाक्छ, कहिले पाक्दैन ।
ओढ्ने, ओछ्याउने केही पनि छैन । अरुका जड्यौरी लुगा कपडा छन् शरीरमा । बिहान बेलुका छाक टार्न पनि धौ धौ छ । पुख्र्यौली जग्गा जमिनका नाममा सानो पाखो छ, उब्जनी केही पनि हुँदैन । सहारा दिने कोही पनि छैनन् । सासु बुहारी दुवै एकल महिला हुन् ।
यो कुनै काल्पनिक कथा होइन । बझाङको थलारा गाउँपालिका–६, की ६५ वर्षीया जोग्यानी रोकायाको परिवारको वास्तविकता हो । रोकाया ३० वर्षकी हुँदा उनका श्रीमान भोलानाथ रोकायाको निधन भयो । सन्तानका नाममा एउटा छोरामात्रै जन्मियो । छोराको विवाह गरेको खुसी साट्न नपाउँदै रोकायामाथि अर्को बज्रपात आइलाग्यो । २२ वर्षको कलिलो उमेरमा उहाँका छोरा रमेशको भिरबाट लडेर ज्यान गयो ।
आँखाभरि आँसु पार्दै जोग्यानीले भनिन्, ‘न आफन्त, न त कोही आफ्ना भन्ने नजिकका छन् । बुहारी जोगाबाट एउटी नातिनी र एउटा नाति जन्मिएको थियो । नाति सर्जन १ वर्षको हुँदा रमेशको मृत्यु भएको हो । जोग्यानीको श्रीमानको निधन भएको ३५ वर्ष पूरा भयो ।
छोरा रमेशको निधन भएको पनि ८ वर्ष भयो । ‘घरको पछाडि नहर भएकाले गोठमा र आफू सुत्ने कोठामा पानी आइरहन्छ । बुहारी नातिको मुटुको उपचार गर्न बेंग्लोर गएकी छन्, पिखेत खौलामा भेट भएकी जोग्यानीले भनिन्, ‘हामी दुखी गरिबको अवस्था यस्तै छ, २० वर्षदेखि भैँसीगोठमा नै बस्ने गरेका छौँ ।’
पुरानो भैँसीगोठ रहेको उनी बस्ने घरमा तल गोठ छ र माथि उनीहरुले सुत्ने ठाउँ बनाएका छन् । छोरा रमेश बितेपछि घरमा अहिले उनकी ३१ वर्षीया बुहारीसहित एक नाति र एक नातिनी छन् । नाति नातिना साना र सासु बुहारी विधवा भएका हुँदा घरमा सहारा दिने मानिस नभएकाले उनीहरु समस्यामा परेका छन् ।
नाति सर्जन मुटुको बिरामी भएकाले उपचारका लागि गाँउलेहरुसँग सहयोग माग्न सासूलाई अनुरोध गरेर उनकी बुहारी जोगाले ७ वर्षको छोरा लिएर बेंग्लोर गएकी छिन् । ९ वर्षकी नातिनी भने स्थानीय विद्यालयमा पढ्दैछिन् ।
दुवै सासु बुहारी एकल महिला भएका र छोराछोरी पनि साना भएकाले सासु जोग्यानीले गाउँघरमा अरुको काम गरेर खाद्यान्न मागी पेट पाल्ने गरेकी छन् ।
‘बसेर खाने यो उमेरमा पनि गाँउमा डुलेर नाति नातिनाका लागि भए पनि माग्न जानुपर्छ,’ जोग्यानिले भनिन्, ‘श्रीमान र छोरा हुँदा कहिले पनि समस्या परेको थिएन । अहिले त बिहान बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता छ । धेरै जस्तो दिन नातिनी भोकभोकै बस्छिन् । मलाई आफ्नोभन्दा नातिनीको चिन्ता बढी लाग्छ । बुहारी नातिको उपचारका लागि गाँउलेहरुसँग भारत गएकी छन् । नातिको उपचारमा आफन्तहरुले सहयोग गरेका छन् भन्ने सुनेकी छु । बुहारी पनि भारतमा मजदुरी गरेर नातिको स्याहार सुसार गर्दैछ रे ।’
अहिले घरमा ९ वर्षीया नातिनीसँग जोग्यानी एक्लै छिन् । बुहारी र नातिको बाटो हेरेर पर्खीबस्नु भएको छ । पुस, माघको चिसोमा उनलाई आफ्नोभन्दा नातिनीको चिन्ता बढी लाग्छ । डाँडामा बस्ने भएकाले हावा चलिरहन्छ । राति ओढ्ने ओछ्याउने कपडा छैन । दुवैजना आगो तापेर जाग्राम बस्छन् । आफू र नातिनी चिसोले नकाँपेको दिन नै नभएको उनले सुनाइन् ।
‘आफूले लगाएका कपडा फुकालेर नातिनीलाई ओढाइदिन्छु, अनि नातिनी सुत्छे । बुढा र छोराले कमाएर ल्याएका ओढ्ने ओछ्याउने सबै फाटेर(च्यात्तिएर) काम नलाग्ने भएका छन्,’ जोग्यानीले दुख पोख्दै अघि भनिन्, ‘पुरानो यो भैँसीगोठलाई मर्मत गरेर घर बनाउने सपना छ । धेरैजसो राति राम्रो कपडा लगाएको र बेड–बिस्तरामा नातिनातिनीलाई सुताएको सुईना(सपना) देखेकी छु । म मरिहाल्छु, तर मेरो यो सपना कहिले पनि पूरा हुनेछैन बाबु ।’
बेग्ंलोरमा बस्ने गाँउलेहरुले पैसा उठाएर मुटुको रोगी नातिको उपचार गराइदिएको सुनाउँदै उहाँले बुहारी अहिले बेंग्लोरमा रहेकी र वैशाखमा घर आउने जोग्यानीले बताइन् । छोराको मृत्यु भएको र घरको वंश धान्ने एउटा नातिमात्र भएकाले नातिको स्वास्थ्य ठिक भए भविष्य राम्रो हुने जोग्यानीको आशा छ ।
नेताहरु भोट माग्न आउने गरेको तर सहयोग कतैबाट नभएको पनि उनले गुनासो पोखिन । गरिब घरधुरी परिचय पत्र पाउनेमा पनि उनको नाम छुटेको छ ।
उनको घर नजिकै डाँडामा वडा कार्यालय भए पनि परिवारको अवस्थाबारे भने अहिलेसम्म कसैले बुझबुझारथ गरेको छैन । जोग्यानीकी नातिनी पढ्ने विद्यालयका शिक्षक पदम रोकायाले पनि जोग्यानीको परिवारमा साह्रै समस्या भएको बताए । जोग्यानीकी नातिनी कक्षा २ मा पढ्ने गरेकी तर उनको झोला, कापी, कलम आदिको समस्या भएकाले कहिले विद्यालय जाने र कहिले विद्यालय नजाने गरेको उनको भनाइ छ ।